Hery Rajaonarimampianina : Nitsoaka andraikitra ireo depiote nivoaka ny trano -
AccueilSongandinaHery Rajaonarimampianina : Nitsoaka andraikitra ireo depiote nivoaka ny trano
Niompana feno tamin’ ny tokony hanajana ny demokrasia ny fanazavana izay noetin’ ny filoham-pirenena manoloana ny zava nitranga nandritra ny fandinihana ny lalàm-pifidianana teny amin’ ny antenimieram-pirenena, nambarany tamin’ izany fa “ misy ny tsy manaja ny demokrasia ary misy koa ny tsy mahatanty demokrasia, tsy manaja eo ihany fa ilay tsy mahatanty kosa dia zava –doza “ hoy ny filoham-pirenena tany Sakaraha. Nambarany ihany koa fa lapan’ ny demokrasia ny antenimieram-pirenena ka tokony ho hajaina izany “ tsy voatery hitovy hevitra daholo anie ny olona rehetra, nefa tsy izay akory no handehanana hivoaka ao satria dia tsy mankasitraka iny lalàna iny. Aiza izany ny fanajana ilay vahoaka izay nanolotra anao sy nifidy anao, izay lay demokrasia” hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Notohizan ‘ny filoha ihany ny fanazavana mikasika iny zava nitranga iny fa tsy tokony hitsoaka andraikitra izany solombavam-bahoaka izany “ raha misy ny hevitra tsy mitovy tsy ekenao dia mitondra soson-kevitra na (ammendement ), ary nametraka izany izy ireo nefa tsy nandany izany, fa nitsoaka fotsiny. Amiko izany dia mitsoaka andraikitra” hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Noho izany dia nambaran’ ny filoham-pirenena fa lany iny ny lalàm-pifidianana , ka “ hamafisiko noho izany fa tsy maintsy hisy io fifidianana io ary tsy mataotra izany ny filoham-pirenena “ , maro an ‘isa ihany koa ny solombavam-bahoaka nandany an’ iny lalàna iny hoy ny filoha ary izany dia demokrasia. Noho izany dia ilaina ny fivorana ara-toe-tsaina izany hoe mila mifanaja ny tsirairay, ary ny fanamby hoy ny filoha dia ny fampandrosoana ihany. Noho izany hoy ny filoham-pirenena dia “ miantso ny vahoaka ao hiaraka hanohitra ny fanakorontanana, satria izany no antoky ny fampandrosoana”. Manoloana ireo hetsika fanakorontanana izay misy amin’izao kosa dia mazava ny nambaran’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina “ izay manakorontana anie tsy maintsy amboly korontana foana, satria ao anatin’ izany no hametrahany izay tetikady mba hahazoany ny fitondrana. Mazava ny lalàn’ny demokrasia , ny lalàn ‘ny demokrasia dia ao anatin’ ny fifandimbiasam-pahefana anatin’ ny fifidianana foana, ary izay dia tsy maintsy harovana” hoy ny filoha . Noho izany hoy ny filoham-pirenean dia tsy ekena ny korontana “ ny filoham-pirenena dia efa milaza fa tsy ekena ny fanakorontanana , satria izany ihany no homen’tsiny hoe tsy nahavita n’inona n’inona ianao nefa ny azy isan’andro isan-andro ny azy ny ataony dia ny hanaka anao amin’ ny fampandrosoana “hoy hatrany ny filoha . noho izany hoy ny filoha dia ny fibanjinana ny ho avy tsara no tokony hiombonan’ ny rehetra fo .